Dagaalka Gaalkacayo oo Khasaare Sababay
Khasaaraha dagaalka maalintii labaad ka dhacay magaalada Gaalkacayo ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhow yahay 30 dhimasho ah.
Magaalada Gaalkacayo dhinaceeda waqooyi waxaa maalintii labaad ka dhacay dagaal xoogan, kaasoo maamulka Puntland uu sheegay inay kula jiraan koox argagixiso ah, ayna sii wadi doonaan. Hase yeeshee mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ayaa ku gacan seyray hadalka maamulka Puntland.
Dagaalka ka socda magaalada Gaalkacayo waxa uu xooggiisu ka dhacay maanta xaafadda Garsoor, waxaana lagu soo warramaya inay ka qeyb qaateen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo taangiyo ku hubeysnaa.
Afhayeenka nabadoonada Puntland, Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf Afguud oo u warramay VOA-da ayaa dhaliilay dagaalkaasi. Wuxuuna ku baaqay in arrinta wadahadal loo bedelo.
Inkastoo Maamulka Puntalnd uu sheegay in dagaalkan ay ku qaadeen koox argagixiso ah oo al-Shabaab ka tirsan, haddana marka la eego jawaabaha ka imanaya dhinacyo kala duwan, dagaalku waxa uu u muuqdaa dagaalku inuu yeelanayo weji qabiil, taasoo sii kicin karta xiisado beeleed oo waayadanba ka aloosnaa magaalada Gaalkacayo.